Tag: email email Martech Zone
Tag: email email
Sparkpost: An Email Kuendesa Sevhisi kune Yako App kana Saiti
Svondo, Zvita 10, 2017 Muvhuro, Mbudzi 5, 2018 Douglas Karr
Imwe yemafungidziro ekuvaka webhusaiti kana nharembozha inowanzo kuve maemail. Vagadziri kazhinji vanongoshandisa chikuva email mabasa kutumira zvakapusa zvinyorwa zvemeseji email. Kana ivo vakaomesesa, ivo vanogona kutovaka iyo diki HTML template yekufona uye kutumira maemail pamwe. Kukanganisa kweizvi kune zvakawanda - sekukwanisa kuzivisa uye kuyera kuvhura, kudzvanya, uye kubhuroka. Sparkpost yakavaka yakakwana chikuva cheichi. Maemail anogadzirwa nemaApp-anowanzo danwa kuti transactionional maemail - ndiwo mameseji